Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo ka qeybgaley dhoolatus Militari oo Ciidamada XDS ee Kismaayo ku sugan soo bandhigeen – idalenews.com
Ciidamo ka tirsan kuwa XDS ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubada hoose ku soo bandhigay dhoolatus melateri, iyadoo wasiirka difaaca Soomaliyana uu ku amaanay ciidamadaasi dadaalka ay usoo galeen xoreynta Kismaayo iyo sugidda amaankeedaba.
Ku dhawaad Kun Askari oo ku jira xero ku taala magaalada Kismaayo ayaa soo bandhigay Dhoola tus ciidan oo ay ka muuqatay farsamo iyo xeelado ciidan oo dheeraad ah kuwaas oo dagaal xooggan la soo galay maleeshiyaadka argagixisada Shabaab ilaa ugu dambeyntii ay ka xoreeyeen magaalada Kismaayo.
Wasiirka Wasaraada Gaashaandhigga C/xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi ayaa ugu mahadceliyay ciidamadan iyo kuwa AMISOM dadalka ay usoo galeen xoreynta Jubooyinka iyo sugida amaanka, wuxuuna u balanqaaday in xuquuqda ay ciidamadani ku leeyihiin dowlada ay si deg deg ah u heli doonaan.
‘’Ciidamada halkan an ku aragnay waa kuwo aad u dhisan una habeysan niyadooduna ay aad u sareysom, waxaana ku guubaabiyay ciidamada iney difaacaan Dastuutka Qaranka, waxaana xusid mudan iney ka fogaadeen qabyaalada iyo kala qeybsanaanta’’ ayuu yiri wasiirka Gaashaandhigga C/xakiin Fiqi.
Booqashada wasiirka Gaashaandhigga iyo abaanduuulaha ciidamada XDS ay ku joogaan magaalada Kismaayo ayaa waxa ay qeyb ka tahay dadaalka ay dowladu ugu jirto dhismaha ciidamada XDS.
Xigasho: Raadio Muqdisho, Soomaaliya